New Day Jobs |5Professional traits which don't need special talents | Career Blogs
Workplace Success 07 Jan 2020
1. Punctuality-ရုံးချိန်မှန်တာ၊ deadline တွေ တိတိကျကျထိတာကတော့၊ ချိန်းထားရင် နောက်မကျတတ်တာ စတဲ့ အချိန်မှန်ခြင်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အကျင့်ကောင်းတွေကို ရှိ‌ထားခြင်းဟာ ကိုယ့်ကို colleague တွေက လေးစားသလို၊ အလုပ်ပေါ် commitment ရှိတယ်ဆိုတာလဲ ပေါ်စေပါတယ်။
2. Positive Energy-အလုပ်ရောက်တာနဲ့ ဆူပုတ်ပြီး ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ နေတတ်တဲ့သူနဲ့ တက်တက်ကြွကြွ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေတတ်သူဆို ဒုတိယလူကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ပိုပေါင်းသင်းလိုကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ယေဘူယျအားဖြင့် positive energy ရှိတဲ့သူနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ရတာပိုအဆင်ပြေချောမွေ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
3. Sharing credit-ဘာလုပ်လုပ်ကိုယ်ပဲ နာမည်ကောင်းယူနေတာထက် ကိုယ့် teammate၊ superior၊ subordinate တွေကိုလဲ ပီတိနဲ့ rewardကို share လုပ်တတ်တာကလည်း professionalတစ်ယောက်အတွက် အများလေးစားစေမဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
4. Emotional stability-စိတ်ခံစားချက်တွေကို အခြားသူပေါ်ပေါက်ကွဲတာမျိုးတွေက သဘောထားသေးသိမ်ရာ ရောက်သလို၊ စိတ်ခံစားမှုလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ ကင်ပွန်းတပ်ခံရမဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ အိမ်ကစိတ်ညစ်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်မှာအဆင်မပြေတာပဲဖြစ်ဖြစ် သေချာစိတ်ကိုထိန်းပြီး အဖြေကိုရှာတဲ့ focusကိုပဲ ကပ်ထားပါ။
5. Respect-ကိုယ့်ထက်ငယ်သူ၊ ကြီးသူ၊ ရွယ်တူ အကုန်လုံးဆီကနေ professional တစ်ယောက်အဖြစ် respect ရချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကစပေးရပါတယ်။ လူတိုင်းကို ယဉ်ကျေးစွာပြောခြင်းက ‌mutual respectတည် ဆောက်ဖို့ အရိုးရှင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Professional ဆန်တယ်ဆိုတာဟာ ကိုယ့်အလုပ်မှာ ကိုယ်ကလုပ်နိုင်တယ်၊ ယုံကြည်လို့ရတယ်၊ လေးစားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားတွေကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
?Find great job opportunities here - All jobs in one place
?Ph+959762 378849,9am-6 pm Office Hours